The currency indices indicator - MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက်4- MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ The currency indices indicator – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
The currency indices indicator – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
မာ 14, 2018
အဆိုပါ Indexes_v7L indicator calculates the indices of 8 major currencies. All 8 indices will be displayed in one window. It is possible to enable the automatic detection of the currency pair when attaching toachart, and the output of the corresponding indices. Calculation of CCI, RSI, အရှိန်အဟုန်, MACD နှင့် Stochastic based on the currency indices, and also application of Moving Averages. The indicator displays the increase/decrease in the price of the currency asapercentage of some initial value set as 100% relative to the currency basket. The undeniable advantage of the indicator is the ability to see the entire market at once without switching charts.
The currency indices indicator – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက်4တစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
The currency indices indicator – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက်4သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
How to install The currency indices indicator – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်?
Download The currency indices indicator – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်
Copy The currency indices indicator – သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက် / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Right click on The currency indices indicator – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်
Indicator The currency indices indicator – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
How to remove The currency indices indicator – သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးSigma Bands - MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
Next ကိုဆောင်းပါးGraphically display current trend for all time frames in one simple panel - MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4